UMnu Mandla Ndaba noNks Silungile Mavundla nencwadi i-Killing Half a Woman – the Woman of Resilience.
UMnu Mandla Ndaba osebenza e-Student Governance and Leadership Development ulekelele umbhali, uNks Silungile Mavunda, ukuthi abhale aphinde ashicilele incwadi yakhe yokuqala ethi: Killing Half a Woman – the Woman of Resilience.
UNdaba, owaziwa ngokuthi "uDokotela Ndaba" kubafundi ngenxa yegalelo lakhe elikhulu lokuthuthukisa umphakathi nabafundi wenza iziqu zeMastazi yesibili kwezobuholi e-UKZN kanti naye unencwadi ayibhalile.
Incwadi kaMavundla, oyiMenenja yakwaNdabazabantu nosomabhizini owakhulela e-Clermont, eThekwini, isekelwe ekukhuleni kwakhe eneminyaka eli-10 ngenkathi ehlukunyezwa ngokocansi yisihlobo sakhe. Indaba yaqhubeka ngenkathi edlwengulwa esefunda esikoleni samabanga aphezulu.
UMavundla uthe le ncwadi eshicilelwe ngoNhlolanja isidayise amakhophi angapheu nje kuma-400.
Ekhuluma ngokuhlukunyezwa kwakhe ngokocansi ebusheni bakhe, uMavundla uthe: ‘Ngangizwa sengathi bangibulele kodwa ngavuka. Angibuswa wumqondo wokudlwengulwa kodwa ngibuswa wukuphokophela kwami.’
Ekuqaleni uNdaba wayecelwe ukuthi abheke amaphutha angaba khona kodwa wagcina esiza uMavundla amasonto ayisithupha anzima ukubhala, ukuhlela nokushicilela incwadi kwaGrashyo Publishers. UNdaba wabona kunesidingo sokuthi asize uMavundla ukuthi alandise ngempilo yakhe, njengoba ayazi ukuthi kuzoba namuphi umphumela emphakathini. ‘Kwakumqoka kimi ukuthi ngisize ekubhalweni kwale ncwadi ukuze izokwaziwa yizizukulwane zangomuso zabantu besifazane abathukuthele,’ kusho yena.
Kumanje le ncwadi iqoshelwa abantu abanokukhubazeka kanti kungenzeka yenziwe ifilimu, kusho yena.
UMavundla ufisa sengathi le ncwadi ingakhuthaza abafundi, ivule amehlo abantu ngendaba yokuhlukunyezwa, bese ibasiza ukuthi belapheke emoyeni. ‘Izinto ezingabonakali zinamandla okukubulala kodwa uma uziveza obala, kuyagwemeka lokho.
Uma ufuna ukuthenga i-Killing Half a Woman – the Woman of Resilience, ungabhalela uMavundla ku slungilem@gmail.com noma umthinte ku-073 150 4753.
Amagama nesithombe: ngu-Hlengiwe Precious Khwela